Shan arrimood oo sabab u ah Khilaafka dhex mara dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada - Caasimada Online
Home Warar Shan arrimood oo sabab u ah Khilaafka dhex mara dawladda dhexe iyo...
Shan arrimood oo sabab u ah Khilaafka dhex mara dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada
Tusaale ahaan, khilaafka hadda taagan, dadka wax indha indheeya oo uu ka mid yahay Dr Ibraahim Faarax Bursaliid wuxuu qabaa “in xal loo heli doono, ama ha ka yimaado maamullada gudahooda, ama beesha caalamka oo soo faragelisa”. Laakinse xalkaas muddo ayuu sida muuqata qaadan doonaa.
Labada dhinacba waxaad mooddaa “in midba uu doonayo inuu saaxibka kan kale ka guulaysto”.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah ayaa wadnaha farta ku haya. Waxay ka cabsi qabaan in ay kursiga ku soo laaban waayaan, ama in uu soo baxo musharrax ” u janjeera dhanka dawladda dhexe”.
Kala fogaanshahaas ayaa keenay nin tooxsi ku dhisan musuqmaasuq, iyo in xafiisyada hay’adaha maamulka lagu arko dad ku hayb ah madaxda dhinacyada is haya, maadaama uusan isla xisaabtan jirin.
Waxaa kale oo iyadana jirta in maamullada iyo dawladda dhexe ay qaadaan canshuuro ay su’aal ka taagan tahay waxa lagu qabto iyo halka ay aadaan.